Indawo yokubalekela yesimanjemanje etholakala e-Mission Lake. - I-Airbnb
Indawo yokubalekela yesimanjemanje etholakala e-Mission Lake.
Fort Qu'Appelle, Saskatchewan, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Chara
U-Chara Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuphumula yesimanje eziqhenya ngokubuka okumangalisayo kwechibi layo le-Mission Ridge Winter Park ski hills. I-floorplan yayo ihlukile, iguquguquka futhi ihambisana kahle nazo zonke izinhlobo zezivakashi. Hlola okwengeziwe ku-freshevue.ca Leli kotishi LiyiNdawo Entsha eqedwe ngo-Feb.2020; Ihlanzekile ecwebezelayo futhi yakamuva kuzo zonke izici ezihlanganisa nezindaba ezikhathalela imvelo. Ukunaka imininingwane nobungcweti bekhwalithi ephezulu kuyenza igqame phakathi kwezinye izindawo eziqashisayo. Woza uhlale futhi uphumule eFreshevue.
Lapho uzihlola uzokwamukelwa ngevayibhu ehlanzekile yesimanjemanje, elandelwa umuzwa wokuphumula nokuzola njengoba uhlola okungaphezu kuka-1700sq.ft kuleveli ngayinye. Amakamelo okulala anethezekile futhi athokomele anemibhede yosayizi wendlovukazi namalineni ekhwalithi ephezulu. Amagumbi okugeza anomoya futhi agqamile. Idizayini nomsebenzi waleli kotishi kwacatshangelwa ngokucophelela ukuze ihluke kakhulu futhi ikwazi ukuhlalisa izivakashi ezihlukahlukene. Kusukela emihlanganweni yamabhizinisi amancane kuya kumibuthano yamaqembu kanye nokuhlala kwemindeni eminingi sinesidingo sethu sezivakashi.
I-Qu'Appelle Valley iyikhaya lezinye izindawo eziyingqayizivele nezinhle kakhulu.
Indawo yethu yokubalekela yesimanjemanje itholakala edolobheni laseFort Qu’Appelle; zonke izidingo zisele ngemizuzwana nje. Indawo ibaluleke kakhulu kulolu hlu, ngoba akukhona nje ukuthi uphambi kwechibi futhi ungaphakathi kwebanga lokuhamba le-ski hill. Futhi ungamaminithi angu-40 kuphela ukuya ku-Regina futhi mina umninikhaya wakho onomusa ukukuthumelela umbhalo osheshayo noma ucingo futhi angaba senkonzo yakho ngaphansi kwe-20mins noma izingelosi zami zosizo zingakapheli i-5mins. Sikhona ukuze senze ukuhlala kwakho kube okuhamba phambili futhi okukhumbulekayo...
"SikuMishini ukwenza izinkumbulo!"
Indawo yethu yokubalekela yesimanjemanje itholakala edolobheni laseFort Qu’Appelle; zonke izidingo zisele ngemizuzwana nje. Indawo ibaluleke kakhulu kulolu hlu, ngoba akukhona nje…
UChara Ungumbungazi ovelele